super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး
super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး APK ကို
super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီးချက်ချင်းတောက်ပဦးဆောင် flash ကိုအလင်း & အပြင်းထန်ဆုံးမီးရှူးတိုင်အလင်းထဲသို့သင့်ရဲ့ device ကိုပြန်သွားလေ၏။ အဆုံးစွန်အလင်းရောင် tool ကိုကင်မရာအပြည့်အဝအားသာချက်အလင်း LED ကြာပါသည်။ strobing / Blink Mode ကိုလည်း $ 100 နည်းဗျူဟာလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအပေါ်အဖြစ်ထောက်ခံသည်။ အခုတော့တောက်ပဦးဆောင်တဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလုံးဝအခမဲ့ပါ! အခုတော့ဖလက်ရှမီး Download!
- Breaking! Facebook စာမျက်နှာ, သင်သည်ငါတို့ချစ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ! ငါတို့သည်သင်တို့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ယောက်ျားတွေကြိုဆိုပါတယ်။ NOW ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကိုလိုက်လာကြ!
- Facebook က Links များ:
* အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး - သာမန်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး & မီးရှူးတိုင်အလင်းထက်ပိုမိုအားကောင်းတောက်ပဖလက်ရှမီး။
* အခမဲ့ဖလက်ရှမီး - 500m အသုံးပြုသူများကိုကျော်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ Android အတွက်အစွမ်းထက်ဓာတ်မီး app ကို။
* တောက်ပဖလက်ရှမီး - ချက်ချင်းတောက်ပဦးဆောင်တဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့သင့်ရဲ့ device ကိုလှည့်။
* Easy-To-အသုံးပြုခြင်း - မြန် Startup စာမျက်နှာနှင့်ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဖလက်ရှမီး app ကို။
* LED ဖလက်ရှမီး - မယ့်တကယ့်နေရာလေးကိုမီးရှူးတိုင်အလင်းကိုအသုံးပြုပြီးကဲ့သို့အာဏာကိုအလင်းတွင် / ပိတ်သို့ပြောင်းပါ။
* Flash ကိုအလင်း - သင့်ဖုန်းကို LED ဖလက်ရှမီး blinking Amazing! frequency ချိန်ညှိ။
* ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရစ်ဖစ် - လှပသောမျက်နှာပြင်နှင့်သန့်ရှင်း Layout စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းလုပ်!
* strobing ဖလက်ရှမီး -9အမျိုးမျိုး strobing / Blink Mode ကိုစစ်တပ်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကဲ့သို့ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး Features:
- တောက်ပဖလက်ရှမီး - ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအေးမြတောက်ပ။
တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီးအမြန်ဆုံးလမ်းနှင့်အလွယ်ကူဆုံးကိုထိပုတ်ပါတစ်ဦးအားကြီးသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်သွားလေ၏။ အခမဲ့ဖလက်ရှမီးသင့်ရဲ့ညဥ့်ကိုတက်ထွန်းနှင့်အရေးပေါ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ တောက်ပဖလက်ရှမီးမျိုးစုံနဲ့ LED သင်အကောင်းဆုံး flash ကိုအလင်း & ပါဝါအလင်းများကိုပေးစွမ်းကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဝစ်ဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။
- LED ဖလက်ရှမီး - 1 ကလစ်နှင့်အတူပါဝါအလင်း။
multi နဲ့ LED ဖလက်ရှမီးသငျသညျအတောက်ပ LED ဓာတ်မီးဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်မှောင်မိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရကူညီပေးနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီးတောက်တောက်ကိုမှန်ကန်နေရာလေးကိုမီးရှူးတိုင်အလင်း app ကိုများကဲ့သို့ထွန်းလင်း။ မှောင်မိုက်၌အသုံးပြုသောအခါ, အလွန်အေးမြတောက်ပ Power ကအလင်း။ ခိုင်မာတဲ့ဖလက်ရှမီးကို download!
- strobing ဖလက်ရှမီး - ချိုမြိန်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပါတီ & အရေးပေါ်။
အထိခိုက်မခံ flash ကိုအလင်းအကြိမ်ရေ controller ကိုအတူချိန်ကိုက် strobing လက်နှိပ်ဓာတ်မီးအကြိမ်ရေ။ Flash ကိုအလင်းမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဦးဆောင်သောလေဆာ torchlight & စစ်တပ်ကိုသုံးပြီးကဲ့သို့ပါတီ, အရေးပေါ် & တည်နေရာခြေရာခံဘို့သုံးနိုင်တယ်; အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အရေးပေါ် LED အလင်းနှင့်တူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
- ဖလက်ရှမီး Widget လေး - home screen က် / ပိတ်အလင်းဖွင့်။
ဖလက်ရှမီး widget ကသင့်အိမ် screen ပေါ်မှာထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ချင်း 1 ကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူထိန်းချုပ်တဲ့တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ထွန်းညှိအလင်းထဲသို့သင့်ရဲ့ device ကိုလှည့်။ အဆိုပါတောက်ပဦးဆောင်တဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုနှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် activated နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးအဆင်ပြေအလင်းရောင် tool ကို LED ကအလင်းကိုအသုံးပြုသည်။
- အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး - သန်း 500 ကျော်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။
ဖလက်ရှမီးအခမဲ့ပေါင်းစုံကမ္ဘာပေါ်မှာဦးဆောင်သည့်အကောင်းဆုံးနှင့်တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြစ်၏။ အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ကြော့ UI ကိုပုံစံဒီဇိုင်းပဲရိုးရှင်းတဲ့နည်းဗျူဟာလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့တူပါကမှန်ကန်စေသည်။ ဤသည်အစွမ်းထက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလိုအပျတဲ့အခါတိုင်းလက်မှာဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
- Power ကဖလက်ရှမီး - မှောင်မိုက်ကိုတက်ပွင့်လင်း။
Power ကလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုကင်မရာက Android device ကိုအပေါ် flash LED နှင့်စူပါအစာရှောင်ခြင်း & တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလှည့်ဦးဆောင်တဲ့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအလွန်အသုံးဝင်ပေါင်းစုံကဦးဆောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပါပဲ။ မှောင်မိုက်၌လမ်းလျှောက်နေစဉ် LED အလင်းမီးရှူးတိုင်ဝစ်ဂျက်အဖြစ်အာဏာကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသုံးနိုင်သည်။
- လုံခြုံရေးဖလက်ရှမီး - ကိုအသုံးပြုမှသာဖန်သားပြင် / LED ။
လုံခြုံရေးဖလက်ရှမီးသင့်ရဲ့ privacy ကို & မလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ကျူးကျော်ခြင်းမရှိဘဲအလွန်သေးငယ်သောလက်နှိပ်ဓာတ်မီးများအတွက်ဖန်သားပြင် / LED ကိုအသုံးပြုသည်။
- တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီးနှင့်အတူ, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
+ ဖလက်ရှမီးအခမဲ့အလင်းဖွင့်သင့်ရဲ့ညဥ့်အခါ, ပါဝါပြတ်တောက်။
+ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဂါးငွေ့တန်းနှင့်အတူနေဝင်ချိန်ပြီးနောက်ခွေး Walk ။
+ အလင်းတပ် ချ. နှင့်တောင်တက်အခါနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
+ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပေါင်းစုံနဲ့ LED နှင့်အတူအိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါ။
သငျသညျကားကိုပြန်လည်ပြုပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ်မီးသီးကိုပြောင်းလဲ + ဖလက်ရှမီး app ကိုအကူအညီတောင်း။
ဒါဟာကျိန်းသေအကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး & ကမ္ဘာပေါ်မှာအခမဲ့တောက်ပဖလက်ရှမီးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလငျးကိုလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Flash ကိုအလင်းသင်သည်မည်သည့်အချိန်နှင့်အတူလိုက်ပါမည်! ယခုအခမဲ့ဒီဖလက်ရှမီး Download!
super-တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး
5.36 ကို MB